Chikanganiso muGoogle's Kuzivikanwa Kwevanhu - uye Dambudziko | Martech Zone
Chikanganiso muGoogle's Kuzivikanwa Kwevanhu - uye iyo Njodzi
China, Gunyana 5, 2013 China, Gunyana 5, 2013 Douglas Karr
Shamwari yakanaka Brett Evans kwakaunza inonakidza yekutsvaga mhedzisiro kwandiri. Kana vamwe vanhu vakatsvaga Douglas Karr, mamiriro ezvinhu epadivi akazadzwa neruzivo nezve mugadziri wefirimu (kwete ini), asi nemufananidzo wangu.
Chinhu chinonakidza ndechekuti hapana hukama pakati peiyo Wikipedia data uye yangu yeGoogle + nhoroondo Iko hakuna chinongedzo paWikipedia yake icho chine chekuita neni, hapana chinongedzo paprofile yangu yeGoogle + icho chinobatanidza nepeji rake reWikipedia… saka Google + yakasarudza sei kuti neimwe nzira yakanga yakafanana? (Ini ndanga ndiine peji reWikipedia, asi vakaibvisa pandakagadzirisa rumwe ruzivo rwakanga rwakanganisa.)
Yedu SEO Muongorori akatanga tambo nezvazvo muboka rake reSEO paGoogle + uye vazhinji vakataura kuti Google ine chinoshamisa sei disambiguation algorithm… asi zvakadaro zvakakundikana pano. Ini ndanga ndisisina hanya nazvo kusvika JC Edwards akaunza mubvunzo unotyisa:
Neraki iro nyaya iyi yaisanganisira director director, chii chingadai chakaitika dai anga ari mwana wechibharo kana mhondi uye vakaratidza mukomana uyu kutarisana?
Iyo ipfungwa inotyisa kwazvo! Uye zvinoita sezvisinganzwisisike kuti Google yaizotora kuzivikanwa kwemunhu uye kwete kunyatso kuisimbisa kana kuisimbisa nayo kuti munhu. Vanoita izvi kana zvasvika pamabhizinesi, zvigadzirwa uye zviratidzo ... vanhu havangakoshe here? Ndiri kuona dambudziko padhuze!
Tags: kunyorakusanzwisisikadouglas karrkuzivikanwa kweGooglegoogle searchmhedzisiro yekutsvaga
taura: Media Monitoring uye Management Yakaitwa Nyore
Setup Authorship neiyo Yoast's WordPress SEO